‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छ’ : RajdhaniDaily.com -
Home Editor-Picks ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छ’
एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीको राय
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट आफ्नो राय राख्ने क्रम जारी छ । बुधबारको सुनुवाइमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार भएको तर्क राखे ।
एमिक्स क्युरीको स्वतन्त्र मत राख्दै बहसमा उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार स्पष्ट रूपमा दिएको बताए । यदि सरकार बनाउने कुनै सम्भावना पनि छैन र कुनै पार्टी तयार नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार स्वतः हुने उनको भनाइ थियो ।
’सरकार बनाउन कुनै पार्टी तयार भएनन् भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारमा रहेको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने अधिकार छ । म प्रधानमन्त्री हुँदैन भन्ने गणेशमान सिंहजस्ता मान्छे पनि छन् नि नेपालमा,’ उनले भने । ‘संविधान लेखनमा केही त्रुटि पक्कै छन्,’ उनले भने, ‘जस्तो कि कुनै पनि दलले सरकार गठन गर्ने सक्दैन भनेमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था लेखिएको छैन ।’
‘संविधानको अधिकार संसद्मा हुन्छ । राजनीतिक अधिकार कार्यकारीमा हुन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले बहसको क्रममा भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार संसद्ले प्रयोग गर्दा त्यो जनताले प्रयोग गरेको मानिन्छ । त्यसैले सरकार र कार्यकारीको अधिकार सीमित बनाइएको हुन्छ । सरकार बनाउने, गिराउने काम संसद्को हो ।’
विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र मनमोहन अधिकारीले पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण संसद् विघटन गरेको उदाहरण मैनालीले पेस गरे
उनले बहस गर्दै गर्दा इजलासका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीलाई प्रश्न गरे । दुईवटा संविधानसभा बन्यो, त्यहाँबाट संविधान जारी भयो । ती संविधानसभाका छलफलमा पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण पनि संसद् विघटन गर्न पाउनेबारे छलफल भएको थियो त ?’ मैनालीले छलफल भएको जवाफ दिए ।
त्यस्तै, उनले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने दाबी प्रस्तुत गरिरहँदा न्यायाधीश सिन्हाले नैतिकताको प्रश्न गरेका थिए । न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गर्दै भने, प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन जतिपटक पनि गर्दा यसलाई राजनीतिक कुरा भनेर छोड्ने कि संवैधानिक कुरा भनेर न्यायालयले निरुपण गर्ने हो ? केही तार्किक पुष्टि त हामीले पनि गर्नुपर्ला ?
लगतै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन् हामीले अब कहाँको अभ्यास हेरेर निर्णय लिने त ? विदेशको अभ्यास हेरेर निर्णय गर्ने कि संविधानमा के लेखिएको कुरा ? जसको जवाफमा मैनालीले दुवै विषय हेरेर निर्णय लिनुपर्ने जवाफ दिए ।
त्यस्तै, उनले प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा पनि संसद् विघटन गर्न सक्ने अधिकार रहेको तर्क राखे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको लिखित जवाफमा पनि पार्टीले असहयोग गरेको भन्ने कुरा उल्लेख गरेको भन्दै मैनालीले नेकपाभित्रको विवादले अहिलेको अवस्था आएको बताए ।
उनले आफ्नो दाबी बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्न विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र मनमोहन अधिकारीले पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण संसद् विघटन गरेको उदाहरण दिए । अहिले प्रधानमन्त्रीले पार्टीको आन्तरिक कारणबाट संसद् विघटन गरेको भनेर जसरी कुरा आइरहेको छ विगतमा हेर्दा पनि अवस्था उस्तै भएको मैनालीको तर्क थियो ।
त्यस्तै, एमिकस क्युरीका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवाद प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा भनेजस्तो राजनीतिक प्रश्न नभई संवैधानिक विवाद भएको भन्दै अर्थ लगाए । उनले संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार बहुमत प्राप्त अर्थात् संविधानको धारा ७६ (१) र (२) अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीलाई नहुने जिकिर गरेका थिए ।
सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक र विपक्षीले आआफ्नो तर्कअनुसार संसद् विघटनको विषय आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले एमिकस क्युरीसँग अदालतले कुन संविधानअनुसार व्याख्या गर्ने हो भनी प्रश्न गरेका थिए । रिट निवदेकका तर्फबाट २०७२ को संविधानले संसद् विघटनको अधिकार नभएको तर्क गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री ओलीपक्षबाट २०४७ सालको संविधानको अधिकार अहिले साइलन्ट रूपमा रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
सोही विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश राणाले संसद् विघटनको व्याख्या कुन संविधानअनुसार गर्ने हो भनी एमिकस क्युरीसँग राय मागेका थिए । बहसकै क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले लामो पृष्ठभूमि बाँध्दै सोधे, ‘२०४७ सालको संविधानसँग २०७२ सालको संविधानको सम्बन्ध छ कि छैन ? अब अदालतले २०४७ को संविधानलाई सिरानी हाल्ने कि २०७२ को लाई ? धारा ८१ (१) को सम्बन्ध ७६ (७) सँग मात्रै हो कि अरूसँग पनि छ ?’
जसको जवाफमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले सर्वोच्चले संसद् पुनस्र्थापना गरेर संविधान बचाउने विकल्प खोज्न सुझाव दिएका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार दुईवटा अवस्थाका प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै हुने दाबी गरे । उनले बहसका क्रममा भने, ‘धारा ७६ (५) अनुसार बनेको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावका जाने अधिकार स्पष्टमा रूपमा संविधानले दिएको छ । यदि सो प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा ७६ (३) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यो अधिकार छ । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई विघटन सिफारिस गर्ने अधिकार छैन ।’
सर्लाही । १५ किलो प्रतिबन्धित लागु औषध गाजाँ सहित सर्लाहीमा ३ जना पक्राउ परेका छन । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका वडा न. १७, रानीगंजबाट लागूऔषध...
Editor-Picks Kumar Raut - December 22, 2020 0
दैलेख । डाईक्लोफेनेक मुक्त भएको १० वर्षपछि यहाँको जिल्लामा प्रकृतिको कुचिकर मानिने गिद्ध देखा पर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय जिल्लालाई...
प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्त्यालको निधन
बागलुङ । प्रतिनिधिसभा सदस्य एंव संविधानसभा सदस्य ज्ञानकुमारी छन्त्यालको ६६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उनको उपचारका क्रममा शहिद गंगालाल ह्दयरोग केन्द्र काठमाडौंमा निधन...